Dowladda Somalia oo cadaysay Mawqifkeeda ku aadan Hirshabelle. – Hornafrik Media Network
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa mowqif cad ka qaadatay khilaafka siyaasadeed ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyadoo taageertay go’aankii Baarlamaanka Hirshabeelle ay xilka uga qaadee Madaxweynihii maamulkaas Cali C/llaahi Cosoble.
Kulan aan caadi aheyn oo ay isugu yimaadeen Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa waxaa warbixin looga dhageystay Wasiiradii Jowhar u tagay xaqiiq raadinta, waxaana ay Golaha uga warbixiyeen kulamadii ay la qaateen dhinacyada kala duwan ee maamulka.
Golaha Wasiirada ayaa markii dambe ayiday go’aankii Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle ay ku sheegteen inay Xilka kaga qaadeen Madaxwaynihii Maamulkaasi, Cosoble.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka, Cabdi Faarax Juxa ayaa gaba gabadii kulankaas saxaafada u akhriyay war murtiyeed ku aadan mowqifka dowladda ka qaadatay khilaafka siyaasadeed ee Hirshabeelle, wuxuuna sheegay in la tixgeliyay go’aankii Baarlamaanka Hirshabeelle ee ay gaareen 14-kii bishan.
Cali C/laahi Cosoble ayaa horay ugu eedeeyay Dawladda Somalia inay ka dambayso Khilaafka ka dhex jira Maamulka Hirshabelle. Waxaana uu ku eedeeyay Raiisul Wasaare Khayre inuu ku sameeyay Inqilaab Siyaasadeed.